Sabab la yaab leh oo Sh. Shariif ku qasabtay inuu isaga baxo kooxaha Mashruuca kasoo qaatay Imaaraadka - Caasimada Online
Home Warar Sabab la yaab leh oo Sh. Shariif ku qasabtay inuu isaga baxo...
Sabab la yaab leh oo Sh. Shariif ku qasabtay inuu isaga baxo kooxaha Mashruuca kasoo qaatay Imaaraadka
Muqdisho (Caasimadda Online) – Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa maalmihii ugu dambeeyey kulamo kala duwan la qaadaney Madaxda ugu sareyso Soomaaliya sida Madaxweynaha iyo Ra’isulwasaaraha.
Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo maalmihii dambe qeyb ka ahaa ololaha looga soo horjeedo dowladda Soomaaliya oo ay waday Imaaraadka Carabta ayaa hadda u muuqdo inuu gaba ahaanba isaga baxay, kadib markii uu heli waayey hal arrin oo uu muddo raadinayey markii horena ku qasbeysay inuu kamid noqdo Kooxaha ku xiran Dalka Imaaraadka Carabta.
Sheekh Shariif ayaa la filayaa inuu door weyn ka qaadan doono sidii dowladda dhexe looga dajin lahaa culeysyada kala duwan ee uga imaanayo kooxaha mucaaradka ku ah, waxayna Madaxweynaha iyo Ra’isulwasaaraha isku afgarteen qodobo aan lala wadaagin saxaafadda oo ay ugu muhiimsaneyd inuu la shaqeeyo dowladda.